Tag: leexo | Martech Zone
Waa maxay Platform-side Platform (DSP)?
Axad, Janaayo 15, 2017 Axad, Janaayo 15, 2017 Douglas Karr
In kasta oo ay jiraan shabakado xayeysiis ah oo aad u tiro yar oo xayeysiiyayaashu ka iibsan karaan ololeyaal isla markaana ay maareyn karaan ololahooda, haddana barnaamijyada dhinaca dalabyada ah (DSPs) - oo mararka qaarkood loogu yeero dhufto-iibsiga - waa kuwo aad u casri ah oo bixiya qalab ballaadhan oo lagu bartilmaameedsado dhig dalabyada waqtiga-dhabta ah, raad-raaca, dib-u-habeynta, iyo sii hagaajinta meeleynta xayeysiinta. Nidaamyada dalabku waxay awood u siinayaan xayeysiistayaasha inay gaaraan balaayiin aragti ah oo ku jira agabka xayeysiinta oo aan lagu xaqiijin karin goobaha sida raadinta ama bulshada.
BrightTag: Madal Maareynta Tag Tag
Khamiista, Oktoobar 31, 2013 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Laba arrimood oo xirfadleyda suuqgeynta suuqgeynta ay si joogto ah ula dagaallamaan khadka tooska ah ayaa ah awoodda lagu yareyn karo waqtiyada xamuul ee degmadooda iyo awoodda ay u leeyihiin inay si dhakhso leh ugu daadiyaan xulashooyinka calaamadeynta dheeraadka ah guryaha ay leeyihiin. Shirkadda caadiga ah ee ganacsiga waxay lahaan kartaa jadwal dejin oo qaadata toddobaadyo ama xitaa bilo si ay isbeddel ugu hesho goobta. Mid ka mid ah macaamiisheenna ganacsiga ayaa isku dhafay maareynta sumadda shirkadda BrightTag ee bogooda oo leh natiijooyin aan caadi ahayn. Boggoodu wuxuu waday falanqeyn badan